IKholeji kunye neYunivesithi: Yintoni eyahlukileyo?
Kubafundi nabazali Ukukhetha iKholeji
by UKelci Lynn Lucier
Ngaba Kukho Ukuphazamiseka Ngaphandle Kwegama Nje?
Abantu abaninzi, abafundi beekholeji zibandakanya, abazi kakuhle ngokupheleleyo umahluko phakathi kweekholeji kunye neyunivesiti. Enyanisweni, ngelixa amagama asetyenziswa ngokungafaniyo, bahlala bebhekisela kwiinkqubo zesikolo ezahlukileyo. Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokufaka isicelo kwisikolo esithile, kukuhle ukwazi ukuba yintoni eyahlula omnye kwenye.
Ikholeji kunye neYunivesithi: Iingqungquthela
Ukungaqondi kakuhle okokuba iikholeji ziyimfihlo ngelixa iifunivesithi zikarhulumente.
Le nto ayinayo inkcazo eyahlula ezo zibini. Esikhundleni saloo nto, ngokuqhelekileyo ukuhluka kumgangatho weedriki eziqhutywa.
Ngokubanzi-kwaye, ngokuqinisekileyo, kukho iikholeji kuphela kunye nokugxila kwiiprogram ze-grade. Nangona isikolo seminyaka emine sinokunika iidanga zeCachelor, ezininzi iikholeji zasekuhlaleni zifundisa kuphela i-degrees of Associate degrees. Ezinye iikholeji zinika izifundo zokugqibela.
Uninzi lweeyunivesithi, ngakolunye uhlangothi, linikela ngeesibini zegraduate kunye nezifundo ezigqibeleleyo. Abafundi abakwiikholeji abanqwenela ukufumana i-Master's or Ph.D. kuya kufuneka ukuba baye eyunivesithi.
Zininzi izakhiwo zeyunivesiti ziquka iikholeji ezizodwa kwiiprogram ze-grade or in a particular profession. Esi sihlandlo esiqhelekileyo kwisikolo somthetho okanye kwisikolo sezonyango esingaphantsi kweyambule yeyunivesithi enkulu.
Izikolo ezibini eziyaziwayo e-US zinikeza imizekelo epheleleyo:
Ikholeji yaseHarvard yiSikolo seBanga le- Harvard . Abafundi banokufumana ubugcisa babo be-liberal Bachelor ukusuka kwikholejini baze batyelele kwinkqubo yokuphumelela kwiyunivesiti ukuba baphishekele i-Master's or doctorate.
IYunivesithi yaseMichigan inikezela ngeesibini zegraduate degrees kunye neesigidi. Abafundi, ngokomzekelo, bangafumana i-Bachelor degree kwizopolitiko kunye ne-degree degree ngaphandle kokutshintsha izikolo.
Ukuba awuqinisekanga ukuba izinto zisebenza njani kwiziko lakho okanye kwisiko ocinga ukuba uya kuzo, yenza ezinye uphando kwiwebhusayithi ye-campus. Baya kuthi banqwenela ukuphula iinkqubo ezisekelwe kwiintlobo zamadigri abo.
IYunivesithi kunye neeKholeji zobuGcisa kunye neNkundla yokuThunywa
Ngokuqhelekileyo, iikholeji zivame ukuba nomzimba omncinci womfundi kunye nobuchule kunamanyunivesithi. Esi sizathu sokwemvelo kwenkqubo ephantsi. Ngenxa yokuba iikoyunivesithi ziquka izifundo zezifundo, abafundi abaninzi baya kwezi zikolo ngethuba elinye kwaye abasebenzi abongezelelweyo bayadingeka ukujongana neemfuno zabafundi.
Iiyunivesithi nazo zivame ukunikezela ngeentlobo ezahlukeneyo zeeklasi kunye neeklasi ngaphandle kweekholeji. Oku kukhokelela kubani abafundi abaninzi abahlukeneyo abanomdla omkhulu kunye nezifundo.
Ngokufanayo, abafundi baya kufumana iiklasi ezincinci ngaphakathi kwikholeji kunokuba beyunivesithi. Ngelixa iikoyunivesithi zinakho ukuqhuba izifundo kunye nabafundi abayi-100 okanye ngaphezulu kwiholo yokufundiswa, ikholeji inokunikela isifundo esifanayo kwigumbi elinama-20 okanye ama-50 kuphela abafundi. Oku kunika ingqwalasela yomntu ngamnye kumfundi ngamnye.
Ngaba Unokukhetha iKholeji okanye iYunivesithi?
Ekugqibeleni, kufuneka uthathe isigqibo sokuba yeyiphi indawo yokufunda ofuna ukuyilandela, kwaye makunike isikhokelo sakho kwisigqeba semfundo ephakamileyo oya kuyo (ukuba kukho).
Ukuba uzama ukwenza isigqibo phakathi kwezikolo ezifanayo ezifanayo, kukuhle ukuqwalasela isitayela sakho sokufunda.
Ukuba ufuna amava aqhelekileyo ngamanqanaba amancinci eklasi, ikholeji inokuba yinto ekhethekileyo. Kodwa ukuba iqela labafundi abahlukeneyo kunye negradu ephakamileyo yokuphumelela, kufuneka ukuba uluhlu lwe-yunivesithi inokuba yindlela yokuhamba ngayo.
Iipolishi zeKholeji eziPhambili kunazo zonke eUnited States
Iipilaji zeeFilaji zeFiladelphia kunye neeYunivesithi
I-Case Western Reserve University Photo Tour
Iikholeji neeNkqubo zoBunjineli
I-Barnard College Photo Tour
I-Princeton I-Photo Tour Tour
Ikholeji yaseWilliams - Hlola iCampus kule Ntambo yeThoto
I-California State University System
I-8 Best College College Books zokuthenga ngo-2018
Izizathu ezi-5 ezingabikho kwiikholeji zoKhenketho ngexesha lokuphuka kwexesha lasehlobo
Iindleko zeNdalo zeCotton
Venus Virgo Man - Iimpawu Zothando
Indlela yokukhumbula iKemistri
Imigaqo yeGalofu - Ummiselo we-30: Ibhola elithathu, ibhola elihle kakhulu, iMidlalo yeBhola emine
Konke Nge-White House Press Corps
Izithembiso ezenziwe nguDonald Trump ngo-2016 ukhetho loMongameli
Ixesha lexesha leNgqangi
I-Stagflation yoQoqosho kwiNkcazo yeMbali
Imiyalelo yokunyuka kweDwala: "KuBelay"
Indlela yokubhala izivakalisi e-Algebra
Iinguqu ezinhlanu eziPhakamileyo phakathi kweVB 6 kunye neVB.NET
Yintoni Eya kwenzeka Kwizilwanyana Ukuba Wonke Uhamba Ngomkhuhlane?
I-Molecular Equation Definition (iKhemistry)
I-Q ne-A Gun Gun, Ulawulo lwe-Gun, kunye nemibuzo ebuzwa rhoqo
Oktobha Iingqungquthela, iMisebenzi yeeholide, kunye neMicimbi yabaFundi abaQalayo
IiRekodi zehlabathi zeRodeo
I-Zen Art ye-Haiku
Isifundo Esithembekileyo se-Aesop - AmaFrogs kunye neLizwi
Inkqubela yeThathu kunye neNtlupheko 1186 - 1197: Umda weeNkqubela
Ukujonga ngaphakathi ngaphakathi kwizikolo ezizimeleyo
Iifilimu ezili-12 ezigqwesileyo ezibuhlungu kwiTV
AmaYuda ngoYesu Ukholo Lokukholwa
Indlela Yokukhulisa I-Copet Acetate I-Acetate I-Monohydrates Crystals